Vitalik Buterin dia manahy momba ny Ethereum — Izao no navalin'ny vondrom-piarahamonina - Cryptocurrency Mining Rigs & GPU Miners Online
Admin Vaovao farany momba ny Cryptocurrency & Crypto Mining 0 Aprily 4, 2022
Araka ny nanehoan'i Vitalik Buterin ny ahiahiny momba ny mpilalao mifantoka amin'ny tombony Ethereum, dia namaly tamin'ny fomba fijery samihafa ny fokonolona.
Ny mpiara-manorina Ethereum Vitalik Buterin dia naneho ny ahiahiny momba ny hoavin'ny blockchain tamin'ny tafatafa vao haingana, ary ireo mpanatrika ny hetsika ETHDubai vao haingana dia naneho fihetseham-po mifangaro momba ny fomba fijeriny momba ny loza ateraky ny crypto.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny gazetiboky Time, Buterin nanondro ny ahiahiny sasany momba ny tambajotra, ao anatin'izany ny fipetrahan'ireo mpilalao izay mitady tombony fotsiny ary miala amin'ny fahitana voalohany momba ny sehatra mitovy. “Raha tsy mampiasa ny feontsika isika, ny zavatra aorina dia ny zavatra mahasoa avy hatrany,” hoy izy.
Ny hetsika ETHDubai vao haingana tao amin'ny Le Meridien Dubai.
Naneho hevitra momba ny fahorian'i Buterin, Sergej Kunz, mpiara-manorina ny 1inch Network, dia nanambara fa tsy mitovy hevitra amin'ilay mpiara-manorina Ethereum izy. Nilaza i Kunz fa na dia misy aza ny “tetik'asa hosoka” mitady vola amin'ireo mpampiasa vola antsinjarany, dia misy ihany koa ireo tetikasa tsara izay tena mila famatsiam-bola ary afaka mahazo izany famatsiam-bola izany avy amin'ireo kapitalista mpandraharaha mitady tombony. Nanonona ohatra ny 1inch, nanazava i Kunz fa:
“Mahita anjely sy mpampiasa vola izahay. Nanampy anay izy ireo. Nanome vola anay izy ireo mba hifantoka tanteraka, hiasa amin'ity fanombohana ity. […] Miasa hanatsara ny habaka izahay, hamorona zavatra miavaka ary hanatsara ny rafitra ara-bola manontolo.”
Aleksei Pupyshev, mpamorona ao amin'ny GTON Capital, dia mino fa tokony hisy fifandanjana eo amin'ny tombom-barotra sy ny hetsika tsy mitady tombony ao anatin'ny habaka. Heveriny fa na dia maro aza ny tetikasa manohana ny fiantrana sy ny famahana ireo olana mifandraika amin'ny fahasalamana, ny valisoa dia afaka mandrisika ny olona hiditra amin'ny indostria.
"Mila fanentanana bebe kokoa ho an'ny olona mikaroka izahay, ary mikaroka amin'ny fampiasam-bola izy ireo."
Etsy andaniny, mahatsapa i Siva S, lehiben'ny teknolojian'ny Ozone, fa mifandray amin'ny fitomboan'ny sehatra ny olana. Araka ny filazany, rehefa mitombo ny tontolon'ny crypto, ireo mpilalao ara-bola nentim-paharazana kokoa izay mifantoka amin'ny tombom-barotra dia hiditra ary haniry "karazana fanaraha-maso." Na izany aza, mino izy fa raha mbola mijanona ho manan-danja ny foto-kevitra fototra toy ny marimaritra iraisana, dia mbola ho faly ny mpamorona hanangana eo ambonin'ny Ethereum.
Mandritra izany fotoana izany, i Raullen Chai, mpiara-manorina ny IoTeX, dia mizara olana mitovy amin'i Buterin. Manahy ihany koa izy fa ny mpisava lalana crypto dia tsy ho afaka hifikitra amin'ny fahitany amin'ny sehatra misy azy. Nanazava izy hoe:
“Manana olana mitovy amin'izany koa aho eto. Tsy azoko antoka raha afaka mifikitra amin'ny fahitany ny olona crypto OG. Manantena aho fa ho vitany izy ireo, ary indrisy fa tsy mahita vahaolana amin'ity olana ity aho."
Related: Vitalik Buterin dia manao lisitry ny olona 100 mahery indrindra amin'ny gazetiboky Time tamin'ny taona 2021
Charles Hoskinson, mpiara-manorina Ethereum ihany koa, naneho ny finoany ny fitsinjaram-pahefana nandritra ny lahateny vao haingana tao amin'ny Binance Blockchain Week. Tamin'ny lahateny fototra nataony, dia nilaza izy fa "Raha mitady vola fotsiny ianao dia very ny zavatra rehetra izay mampiavaka ny teknolojia."
Vidio ny NVIDIA Tesla T4 GPU Computing Processor €2,150.40
Vidio Jasminer X4 Brick 65Mh/s €688.80
Microbt Whatsminer M30s+ 100Th/s amidy €4,620.00
Bitmain Antminer S19 Pro amidy €27,694.80 €11,900.00
Shiba Inu (SHIB)$0.000010-0.43%
Protocole akaiky (akaiky)$3.33-0.78%
Algorand (ZAVATRA MISY)$0.3128401.05%
Bitcoin Cash (BCH)$105.82-0.60%
Axie Infinity (AXS)$14.342.23%
Loop peratra (LRC)$0.3832070.21%